नोबेल मेडिकल कलेज जहाँ उपचार गर्न गएका ४ जनाले एक महिना भित्र मृत्युवरण गरे ! (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
नोबेल मेडिकल कलेज जहाँ उपचार गर्न गएका ४ जनाले एक महिना भित्र मृत्युवरण गरे ! (भिडियो)
विराटनगर । अस्पताल उपचारको मन्दिर हो या मृत्युको केन्द्र । अहिले विराटनगरको एक अस्पताललाई लिएर यो वहस सतहमा आएको छ । सामान्य अवस्थामा उपचारका लागि पुगेका व्यक्तिहरुको पनि एक पछि अर्को गर्दै मृत्यु हुन थालेपछि भन्न करै लाग्छ, कि चिकित्सक खराब छन् या अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रणाली नै गलत छ ।
एक महिना भित्र चार विरामीले ज्यान गुमाए विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा । अस्पताल तोडफोड भयो, सडक जाम गरिए, अस्पतालमा स्थायीरुपमा नै प्रहरी खटाउनु पर्ने अवस्था आयो । तर पनि अस्पतालको उपचारको शैलीमा कुनै सुधार आएन ।
घटना हुन्छन, छानविन समिति गठन हुन्छ तर छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु अघि नै सबै घटनाहरु सामसुम बन्छन् । अनि किन नदोहोरियोस अकाल मृत्युको कहाली नोबेल नामको अस्पतालमा बारम्बार । अझ अहिले अस्पतालहरुमा कसैको मृत्यु भए आन्दोलन चर्काउने गिरोहको उपस्थिति सांगठनिकरुपमा नै हुन थालेपछि नेपालका अस्पतालहरुमा उपचारमा हुने लापरवाही पनि छर्लङगिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहितामा चिकित्सकको लापरवाहीका कारण कुनै विरामीको मृत्यु भएमा ती चिकित्सकलाई कानुनी कारवाही हुने स्पष्ट प्रावधानको व्यवस्था भइसकेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको नेतृत्वमा छानबिन टोली बनाउन सकिने कानुनी प्रावधान भएपनि अहिले सम्म कुनै घटनाको न त छानबिन गरिएको छ न त शुरुवात नै ।
यसले गर्दा पनि अस्पतालहरुमा घटना बढ्दो छ । मुलुक अपराध संहिता लागू भएमा अस्पतालमा हुने लापरवाहीका घटनाहरु निरुत्साहित हुने पक्का छ भने अस्पतालमा हुने घटनाको आडमा कमाउन पल्केका गिरोहहरु पनि पाखा लाग्ने निश्चित छ । त्यसमाथि कतिपय अवस्थामा गल्तीको सजाय भोग्न तयार रहेको चिकित्सकहरुको मनसाय विपरिरत मृत्यु भएका व्यक्तिको आफन्तहरुले नै लेनदेनमा कुरा मिलाउने प्रवृतिले पनि अस्पतालमा विकृति मौलाउदो छ ।
यसबाट दोष भएकै भएपनि सम्बन्धित अस्पताल र चिकित्सकले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् भने ‘अब फर्किने होइन के गर्ने त’ भन्ने मनशाय बोकेका परिवारको प्रवृति पनि बढ्दो छ । कुनै पनि घटनामा एक दुई चिकित्सकलाई कारवाही भए धेरै हदसम्म अस्पतालमा हुने चिकित्सकको लापरवाही रोकिने तर्फ अब भने ध्यान जान आवश्यक छ ।